ओलीसँगको सहकार्य भड्खालोमा जाकियाे: प्रचण्ड - नेपालबहस
ओलीसँगको सहकार्य भड्खालोमा जाकियाे: प्रचण्ड
| १२:२३:५२ मा प्रकाशित
७ माघ, काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अझै औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छैन् । निर्वाचन आयोगले विधिवत रुपमा विभाजन भएको स्वीकार नगरेसम्म नेकपालाई एउटै दलका रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नेताहरुले अगल अलग समूह र गुट बनाइसकेका छन् । अलग अलग गुटका भेला र बैठक धमाधम भइरहेका छन् । केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटी बैठकसमेत अलग अलग नै भएका छन् ।
एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने क्रमसमेत जारी राखेका छन् । तर दुबै दल आफैं आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै विभाजन नभएको दलिल आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’– माधवकुमार नेपाल समूहमा स्पष्ट विभाजित दुई दलको यही रस्साकस्सीले गर्दा अन्य प्रकृयाहरु भने अवरुद्ध भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुबै समूहसँग समदूरी नै बनाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश नं. १ र बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले कसलाई सघाउने भन्ने सन्दर्भ नै अहिले अन्यौलमा छ । उसको तर्क छ–नेकपा अझै विभाजित भएकै छैन् । त्यसैले शेरधन राईको ठाउँमा भीम आचार्य वा डोरमणि पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पदस्थापन गर्न मात्रै हामीले पक्ष विपक्षमा उभिने कुरा आउँदैन – कांग्रेस नेताहरु भन्दैछन् । जबसम्म नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजित हुँदैन, कांग्रेस कतैपट्टि पनि लाग्नेवाला छैन ।
हामीले कहिल्यै पदलाई महत्व दिएनौं , दिएको भए मैले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनी गरिएको सम्झौतालाई त्याग्ने थिइन भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि आफूले ओलीलाई पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्री छाडेको दाबी गरे । पार्टी एकता प्रकृयादेखि अहिलेसम्मको अवस्थाबारे स्वेतपत्र जारी गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि उनले प्रष्ट्याए ।
यही कारण ओलीको कदम प्रतिगमनउन्मुख , असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेपनि कांग्रेसले प्रचण्ड–माधव समूहसँग सहकार्य गर्न हिच्किचाएको छ । त्यसको प्रभाव परेको नेताहरुले मानेका छन् । यसै सन्दर्भमा आज बिहान प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले राजधानीबाट प्रकाशित प्रशारित सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग लामै छलफल गरे । राजधानीको पाँचतारे होटलमा आयोजना गरिएको उक्त अन्तक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवले अब ओलीसँगको सहकार्यमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको प्रष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले भने– राजनीति हो भोलि के होला, यसै नभनौं, तर अबको केही वर्षका लागि भने ओलीसँगको सहकार्य भड्खालोमा जाकिएको छ । अर्थात, ओलीसँग तत्कालै सहकार्य वा मिलनको सम्भावना छैन् । ओलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने कुनै छाँट नदेखाएकाले एकताको कुनै सम्भावना छैन । उनले भने–कतिपयलाई लागेको होला फेरि भागबण्डा मिल्यो भने एकता भइहाल्छ । यो सबै ओलीले आफूहरुलाई बद्नाम गर्ने अभिप्रायले गरेको दुश्प्रचार मात्रै हो ।
हामीले कहिल्यै पदलाई महत्व दिएनौं , दिएको भए मैले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनी गरिएको सम्झौतालाई त्याग्ने थिइन भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि आफूले ओलीलाई पाँचै वर्षका लागि प्रधानमन्त्री छाडेको दाबी गरे । पार्टी एकता प्रकृयादेखि अहिलेसम्मको अवस्थाबारे स्वेतपत्र जारी गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि उनले प्रष्ट्याए । यस्तै अर्का अध्यक्ष नेपालले भने आजको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको कारक ओली नै भएकाले उनले समग्र राजनीतिको परिभाषा नै बद्नाम गरेको बताए ।
ओलीका कारण समाजमा सबै नेता खराब भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै आफू ओली जस्तो तुच्छ र पदलोलुप नभएको स्पष्टीकरण दिए । यसरी हेर्दा प्रचण्ड–माधव समूह अहिले ओलीलाई गलत देखाएर आफ्नो गल्ती र कमजोरी ढाक्ने प्रयत्न गरेको प्रष्ट देखिन्छ । आज ओलीतन्त्र वहाल गर्न प्रचण्ड–माधव पक्षकै कमजोरी मुख्य कारक रहेको समेत धेरैको आरोप छ । ओलीलाई बेलैमा नियन्त्रित र संयमित बनाउनेतर्फ पार्टी संयन्त्र अग्रसर भएको थियो भने अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन भन्ने धेरैको बुझाई छ ।
आर्थिक अभावले डडेल्धुरा सेमी कभर्ड हल अलपत्र २८ मिनेट पहिले
शिक्षकले तलब नपाउँदा विद्यालयमा तालाबन्दी, पठनपाठन प्रभावित २९ मिनेट पहिले
अवैध रकम भारततर्फ जान लागेका बुबाछोरा नियन्त्रणमा ३६ मिनेट पहिले
विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी, विद्यालय बन्द ! ३९ मिनेट पहिले
दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु पेरिसडाँडामा २१ घण्टा पहिले
लोकतन्त्रमा जीतहारको फैसला जनताले गर्छन् : मन्त्री गुरुङ २१ घण्टा पहिले
विदेशमा यो साता कोरोनाबाट थप १ जना नेपालीको निधन ४ दिन पहिले
ओलीको तमासामा प्रदेश सरकार ४ दिन पहिले
सिटिजन्स बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा सुर्खेतको तरङ्गामा २ दिन पहिले
नर्भिकले सुरु गर्यो महिला सर्जनबाटै ब्रेस्ट स्तन क्यान्सरको शल्यक्रिया ७ दिन पहिले
सालपा विकास बैंकले माग्यो कर्मचारी, प्लस टू पासले आवेदन दिन सक्ने ३ दिन पहिले
सैनिक मुख्यालय पुगे अमेरिकी राजदूत ४ हप्ता पहिले
जागरण अभियानमा सहभागिता जनाउन विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा पौडेल १ वर्ष पहिले
घुन्सामा दुई फुटसम्म हिउँ, हिमपातले गाउँ अन्धकारमा ३ हप्ता पहिले
अनसन तोड्न डा.केसीलाई सरकारको आग्रह ५ महिना पहिले
धवलागिरि गाउँपालिकाका १२० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जा वितरण ४ महिना पहिले